खुल्यो ‘सेक्स आइल्याण्ड’, बिना कण्डम सेक्स, गाँजा र विलासिताको अड्डामा कति खर्च लाग्छ ? – Dcnepal
खुल्यो ‘सेक्स आइल्याण्ड’, बिना कण्डम सेक्स, गाँजा र विलासिताको अड्डामा कति खर्च लाग्छ ?
प्रकाशित : २०७९ वैशाख २१ गते १७:०४
काठमाडौं । एक समय कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै ठप्प थियो । तर अब सबै कुरा फेरि खुल्न थालेको छ। यसैबीच, लस भेगासमा एउटा रिसोर्ट पनि खुलेको छ, जुन विलासिताको अड्डाभन्दा कम छैन।
यो रिसोर्टले ‘सेक्स आइल्याण्ड’ चलाउँछ। यो रिसोर्टले आफ्नो विज्ञापनमा मे ५ देखि मे ८ सम्म सेक्स आइल्याण्ड पुनः खुल्ने बताएको छ जहाँ मानिसहरूले असीमित रक्सी, असीमित गांजा र दुई युवतीसँग बिना कुनै सुरक्षा असीमित यौनसम्बन्धको सुविधा पाउनेछन्।
डेलीस्टारका अनुसार सेक्स आइल्याण्डमा लैजानका लागि यो रिसोर्टले ४५०० डलर अर्थात् करिब ५.५ लाख रुपैयाँ मागेको छ । यो बिटक्वाइनमा पनि भुक्तानी गर्न सकिन्छ। दर्तापछि रिसोर्टले नै सिधै मानिसलाई विमानस्थलबाट निजी स्थानमा लैजाने बताएको छ ।
यस स्थानमा मानिसहरूले तीन रात र चार दिन समय बिताउन सक्नेछन्। जहाँ उनीसँगै दुई केटी बस्नेछन् । विज्ञापनमा रिसोर्टले सेक्स आइल्याण्डमा आएका अन्य व्यक्तिसँग युवतीहरू आदानप्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
रिसोर्टले उपलब्ध कराइने सबै युवतीहरू यौनरोग र एचआइभी मुक्त हुने जनाएको छ । रिसोर्टले मात्र यति भन्छ कि कुनै सुरक्षा आवश्यक छैन। सेक्स आइल्याण्डले ५० पाहुनाका लागि ५० टिकट बिक्री गरिरहेको छ । जहाँ पाहुनाहरूले चार दिनको यात्रामा असीमित सेक्स गर्न सक्नेछन्।
सेक्स आइल्याण्डको विज्ञापन पछि, ती मानिसहरू धेरै उत्साहित छन् जो पहिले पनि यहाँ आएका थिए । एकजनाले लेखेका छन् कि यी मेरो जीवनका सबैभन्दा यादगार पल थिए । त्यही क्रममा एक व्यक्तिले लेखेका छन्, ‘मैले मेरो ब्याचलर पार्टीलाई यादगार बनाएकोमा सेक्स आइल्याण्डलाई धन्यवाद दिन्छु । यी घटनाहरू पहिले भेनेजुएलाको तटमा रहेको इस्ला मार्गारीटामा भएका थिए।’